Yini itherral? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UMonica sanchez | | Izimo zezulu, Isimo sezulu
Izinhlobo eziningi zemimoya ziyahlukaniswa, futhi olunye lwazo yi phesheya kwezilwandle. Kwenzeka umoya ophansi wezinhlelo zezintaba noma amabanga, futhi ujwayelekile ikakhulukazi ezindaweni ezingasogwini ezizungezwe izintaba.
Masazi kabanzi ngalo moya wendawo owenzeka ikakhulukazi eningizimu yeNhlonhlo Yase-Iberia, futhi ikakhulukazi esifundazweni iMalaga.
1 Yaqala kanjani le ndawo?
2 Kunezinhlobo ezahlukahlukene?
2.1 Isimo sezulu esifudumele sasehlobo
2.2 Indawo ebandayo yasebusika
3 Ingabe i-terral ilungele ukuntweza?
Yaqala kanjani le ndawo?
Ebusuku, ubuso bolwandle bugcina ukushisa okuqoqiwe emini isikhathi eside, kuyilapho umhlaba uphola ngokushesha. Umoya wasolwandle ofudumele uyakhuphuka, futhi umoya obanda kakhudlwana ovela emhlabathini uyathatha indawo.
Kuvame ukucatshangwa ukuthi lo umoya oshisayo ngoba uqhamuka e-Afrika, kepha iqiniso limbalwa kakhulu ukuthi umoya ofudumele onomswakama ophansi ufika uvela eningizimu. I-terral ingumoya oqhamuka eNyakatho noma eNyakatho-ntshonalanga.
Noma kunjalo, luhlobo lomoya oluthi ngokuvamile ayithandi lutho. Abanye bathi kukwenza uzizwe unganaki, unesifiso kuphela sokuthatha ifeni bese uzipholele ngenkathi une-soda, yebo, uvikelekile kuyo.
Iqiniso ngukuthi yebo. I-terral, enengxenye yaseNyakatho, ingumoya ohlukaniswe ngezinhlobo ezimbili: kufudumele ehlobo futhi kubande ebusika.
Isimo sezulu esifudumele sasehlobo
Lolu hlobo lubonakala ngokuba yomile kakhulu futhi ifudumele. Lapho wehla emithambekeni yezintaba ezizungeze lesi sigodi, umoya ushiswa ngokucindezelwa kwe-adiabatic. Lokhu kusho ukuthi, ngenxa yokwanda okungazelelwe kwengcindezi, ithola amandla amaningi engeke ikwazi ukuyikhulula, ngakho-ke kufanele ikhokhelwe nge-thermodynamically ngokulahleka komswakama nangokwanda kokushisa kwangaphakathi, okwaziwa nge-Foehn Effect. Ngakho-ke, ingaphezulu lamanzi lisuswa laya ngasolwandle, ukuze amanzi abandayo ajulile akhuphuke, abangele lokho, yize kushisa kakhulu, ubuso bolwandle buya ngokubandayo. Lo mkhuba waziwa ngokuthi yinto ekhuphuka kakhulu.
Ubukhona bayo budala ukuthi amazinga okushisa aphezulu ePeninsula aqoshwe.
Ngalokho, izinhlobo ezimbili kufanele zihlukaniswe:
Lowo oqhamuka e-Atlantic unqamula eGalicia, unqamula yonke iNhlonhlo Yase-Iberia.
Omunye, owaziwa ngabantu baseMalaga, ovela entshonalanga nokuthi, lapho efika ogwini lwasePortugal, ajike, ame emfuleni ongena enyakatho yeMalaga, lapho izinga lokushisa likhuphuka khona. Ngemuva kwalokho, iyaqhubeka nokudlulela ethafeni laseMalaga, iba umoya wasenyakatho. Njengokulangazelela, ukusho ukuthi lolu hlobo lomoya eMalaga lungolwasendaweni impela, futhi luvela esiqeshini esithile sasogwini. Eqinisweni, ayifinyeleli njalo eRincón de la Victoria, engamakhilomitha ayi-10 empumalanga.
Abantu baseMalaga bavame ukuthi "intshonalanga iyethuka" lapho umoya wentshonalanga uphendukela enyakatho-ntshonalanga noma enyakatho-ntshonalanga-ntshonalanga, ngaleyo ndlela kukhiqize isimo se-terral.
Indawo ebandayo yasebusika
Lolu hlobo lomoya luvama kakhulu, lunobuningi obungu-38% ngoJanuwari nobuncane obungu-4% ngoJulayi. Kwenzeka ekwindla nasentwasahlobo, futhi ibonakala ngokuba wumoya owomile, onamandla futhi oshiya isibhakabhaka sicace bha. Ikhiqizwa yisiphepho esikude, okuthi, uma izimo ezifanele zihlangatshezwe, singavuna ukwakheka kwamafu edumbu. Vele, ngenkathi lonke izwe lijabulela (abanye ngaphezu kwabanye) ubusika uqobo, obunamazinga okushisa aphansi ngisho nesithwathwa, eMalaga ngenxa yalomoya abadingi ukukhipha izingubo zabo ezifudumele). Izinhlobo ezimbili nazo zingahlukaniswa:
Umoya we-Catabatic noma we-drainage: kuvela ekudonseni komoya obandayo, owehla ngemithambeka yezintaba ubheke ogwini.
Okunye ukuthi imimoya yezwekazi anqamula iYurophu futhi angene ePyrenees. Lapho ziletha iminonjana yomswakama, kuqubuka isiphithiphithi ezintabeni futhi, lapho kuphephetha umoya, amafu amile.
Ingabe i-terral ilungele ukuntweza?
Yize kuphoqa wonke umuntu oseMalaga ukuthi enze ushintsho enkambisweni yakhe yansuku zonke, ngokusho kochwepheshe, lokhu ungomunye wemimoya engcono kakhulu yokusefakodwa kuphela uma ishaya kancane. Eqinisweni, kukhona ochwepheshe abakholelwa ukuthi usuku olufanele kunazo zonke lokuzijwayeza lo mdlalo kulapho kungekho moya ovunguzayo.
Ngakho-ke, uma ufuna ukujabulela umdlalo wakho owuthandayo, ukuya eMalaga ehlobo kungenye yezindlela ezingcono kakhulu 😉
Kuze kube manje ukukhethekile kwethu komunye wemimoya yendawo ebaluleke kakhulu eSpain, i-terral. Ibalulekile ... futhi ayimnandi kwabaningi, kepha ejwayelekile yendawo esenhlonhlweni lapho bejabulela isimo sezulu esifudumele saseMedithera, ngaphandle kwamazinga okushisa aphansi kakhulu. Futhi wena, wake wezwa ngaye?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Yini itherral?
Iyini imisebe ye-ultraviolet